Maamulkii Gobolka Shabelaha Hoose oo Khilaaf Xoogan Soo Kala Dhex Galay | SMC
Home WARARKA MAANTA Maamulkii Gobolka Shabelaha Hoose oo Khilaaf Xoogan Soo Kala Dhex Galay
Maamulkii Gobolka Shabelaha Hoose oo Khilaaf Xoogan Soo Kala Dhex Galay
Warar aynu ka heleyno magalada muqdisho ayaa sheegaya in maamulka gobolka shabelaha hoose uu soo kala dhex galay qilaaf aad u xoogan oo salka ku haya kelinimo telis iyo wax is daba marin.
Wararka ayaa sheegaya in khilaafka uu ka bilowdey kadib kolkii maalintii shaley uu gudoomiyaha gobolka shabelaha hoose Ibraahin Najax uu gurigiisa oo ku yaala degmada waaberi uu shir isugu yeeray qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha degooyinka g obolka iyo maamulka gobolka.
Shirkaasi muhiimadii loo qabtey aheyd in maamulka gobolka iyo degmooyinka ay ka wada xaajoodaan sidii looga qeyb geli lahaa siminaar loogu tala galay gudoomiyeyaasha degmooyinka oo la filaayey inuu ka dhoco magalada baydhaba, Balse waxaa dhacday in Gudoomiyaha gobolka uu isku deyo in uu ku amro gudoomiyeyaasha degmooyinka in aysan ka hadli karin dhibaatooyinka ka jira degmooyinka ay masuulka ka yihiin taasoo buuq badan dhalisay keenteyna in shirkii uu halkaasi ku burburo.
Kulankaasi ayaa sida la sheegay kasoo qeyb gelin qaar ka tirsan masuuliyiinta gobolka ugu sareysa taasoo la sheegay in aan lagu casuumin kulanka uu soo abaabulay gudoomiyaha gobolka ayadoo aan la ogeyn sababta keentey in masuuliyiinta gobolka qaar laga tago qaarna loo yeero.
Maamulka gobolka shabelaha hoose oo markiisa horaba ahaa maamul aan ka howl gelin gobolka ayaa hadana qilaafkani waxaa laga yaabaa inuu u horseedo dib u dhac aad u weyn maadaama gobolka uu haatan ka socdo dagaalo alshabab looga xoreynayo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka. ahayd
Previous articleXOG:Wafdi hogaaminayaan Xasan Sheekh &Sheekh Shariif oo kuwajahan magaalo lagu balamiye si Kismaayo loogu sii qaado
Next articleSawiro: Wasiirka Amniga Jubaland iyo Sarkaal ciidan oo Maxkamad la horgeeyay